ယခင်ဝန်ကြီးဟောင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟု လွှတ်တော်အတွင်းနှင့် အပြင်တွင် ပြောကြားသည့်ကိုယ်စားလှယ - Yangon Media Group
ယခင်ဝန်ကြီးဟောင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟု လွှတ်တော်အတွင်းနှင့် အပြင်တွင် ပြောကြားသည့်ကိုယ်စားလှယ
ရန်ကုန် ဇွန် ၅-မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ဇွန် ၄ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် Supreme Trading Company Limited သည် ယခင်စီမံရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်ဝင်းနှင့် ပတ်သက်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သ ဖြင့် ကုမ္ပဏီဘက်က ၄င်းတို့အခွင့် အရေးရှိသည်နှင့်အညီ လိုအပ်သ လိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မင်းကင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ လွှတ်တော်အတွင်း နှင့် လွှတ်တော်ပြင်ပတွင် ပြော ကြားခဲ့သည့် Supreme Trading Company Limited နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစိန်မြင့်နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာ များသည် လုံးဝ (လုံးဝ) မှန်ကန်မူ မရှိပါကြောင်းနှင့် မိမိတို့အခွင့်အ ရေးရှိသည်နှင့်အညီ တိုင်ပင်ညှိ နှိုင်း၍ လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ၄င်းတို့၏ ဇွန် ၅ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့်ကြေ ညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
Supreme Trading Company Limited ၏ ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရေနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ပါမောက္ခ ဌာနမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံစက်မူလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်း၏ နာယက/ အကြံ ပေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ အသင်း၏ နာယက၊ ASEAN Academy of Engineering & Technology (AAET) ၏ တည် ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်နှင့် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ပါမောက္ခဒေါက်တာစိန် မြင့်မှ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအတွေအကြုံ ၁၃ နှစ်ရှိ သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် အင်ဂျင် နီယာနည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ ကြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန် နဝါရီလတွင် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနမှ Notice to Proceed ထုတ်ပေးခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူသဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မီးလောင် ချိုင် LNG to power စီမံကိန်းတို့ အတွက် စီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ခြေ လေ့ လာဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမူဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း ESIA လုပ်ငန်းစဉ် များအား Supreme Trading Company Limited မှ လျှပ်စစ်ထုတ် လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် ထိပ်တန်းနာ မည်ကြီးဖြစ်သည့် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ပူးပေါင်း၍ သုံးနှစ်ခန့် လေ့လာဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အရေးအကြီး ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အား ရာနှုန်းပြည့်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီး မြှုပ်နှံမူဖြင့် အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင် ရန် အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ရာ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်ရွေးချယ် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဇွန် ၄ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်း အင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးက တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိ ကြောင်း၊ အထက်ပါစီမံကိန်းများ သည် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ဝန်းကျင်ကာလ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အခြေအနေ အရ နိုင်ငံတော်အတွက်အထူးအ ရေးကြီးလိုအပ်နေသော လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပမာဏကို တစ်တပ်တစ် အားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် စီမံကိန်း များဖြစ်ပြီး ခိုင်မြဲသောထုတ်လုပ် နိုင်စွမ်းအား(Base Load and Firm Power) ဖြင့် ဖြည့်စည်းပေးနိုင်မည့် နိုင်ငံတော်၏ စွမ်းအင်မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးသက်ရောက်မူအလွန်နည်း ပါးသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၊ ဧရာ ဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည်နယ် နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့အ တွက် ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်များ စွာဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မူအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အဆောက် အအုံများပါဝင်ခြင်း၊ ၅ဝဝ ကေဗွီ မဟာဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက် ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက် မဟာဓာတ်အားလိုင်းကွန်ရက်ကို ခိုင်မာပြည့်စုံမှုရှိစေခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများအား နိုင်ငံတော် နှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက်ရရှိ နိုင်မည့် စီမံကိန်းကြီးများဖြစ်သဖြင့် Supreme Trading Company Limited နှင့် စီမံကိန်းဝင် နိုင်ငံတ ကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကုမ္ပဏီကြီးများ သည် နိုင်ငံတော်၏ဦးဆောင်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှု၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့၏ ဦးဆောင်မှု၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါ ဝင်မှုဖြင့် အချိန်မီပြီးစီးရန်အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ထုတ် ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၅ဝဝဝ ကျော်ကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မ?
ဆော်ဒီအမျိုးသမီးများ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် စတင်ရရှိ
”အကယ်ဒမီကို မမှန်းတော့ဘူး။ ပရိသတ်ပေးတဲ့ အကယ်ဒမီက ရပြီးပါပြီ” ဂွမ်းပုံကြီး
မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ကို ခေါ်ယူ သတိပေးသည်ဟူသည့် သတင်းမှာ မဟုတ်မှန်ဟု ဒီချုပ်ပြောခွင့်ရ ??
ချစ်သူထံမှ အခွင့်အရေး ပြန်ရခြင်းမျိုးဟု စတာရစ်ခ်ျ ခိုင်းနှိုင်း